Kwitshaja ye-Ac / DC yeFektri-China iTshaja Ac / DC abavelisi kunye nabaxhasi
Ishaja ye-AC yonyuswe ngodonga yenziwe yiyunithi yolawulo oluphambili, unxibelelwano phakathi kwabantu kunye nekhompyuter, ukutshaja ujongano, ukubala umlinganiso kunye neyunithi yokutshaja. Iyaxhathisa ukungcangcazela kwaye inemisebenzi epheleleyo yokukhusela, iklasi yokukhuselwa yi-IP54, egubungela indawo encinci, ehlangabezana nokufakwa kunye nokusetyenziswa kwendalo ngaphakathi nangaphandle, kwaye ibonelela ngamandla e-AC kwizithuthi zombane ngetshathi ebhodini.
I-CSI 60K500 / 750-EUJCabc kwinqanaba eliphezulu le-AC / DC iibhetri ezihlawulisa umatshini iimoto
Uhlobo lwe-CSI yunithi yohlobo lwe-AC / DC kwitshaja ekhawulezayo yokubonelela ngonxibelelwano lomntu kunye nekhompyuter, uyilo lwayo lweemodyuli luququzelela ukugcinwa kwezixhobo kunye nokwandiswa; uyilo-mbonakalo-ntathu luqinisekisa ukuphuma kwamandla kwe-AC 43kw kunye ne-DC 60kw ngaxeshanye.
Inkqubo ye-CSP 15 / 30K-E yenkqubo yokutshaja ye-AC / DC
I-CSP 15 / 30K-E uthotho lwento ehambisekayo yetshaja ekhawulezayo ye-DC ayimelani nokungcangcazela kwaye inemisebenzi yokhuselo epheleleyo, efanelekileyo kwizikhululo zokutshaja ibhasi, indawo yokupaka, iivenkile zokulungisa iimoto, abenzi bemoto kunye nezinye iindawo apho abathengi banokuphendula ngokukhawuleza kwaye bavavanye amandla ongezelelweyo .
I-CSP 15 / 30K500-J uhlobo olushukumayo lwetshaja ekhawulezayo ye-DC iyamelana nokunyikima kwaye inemisebenzi yokhuselo epheleleyo, efanelekileyo kwizikhululo zokutshaja ibhasi, indawo yokupaka, iivenkile zokulungisa iimoto, abenzi bemoto kunye nezinye iindawo apho abathengi banokuphendula ngokukhawuleza kwaye bavavanye amandla ongezelelweyo.
CSW 15 / 30K-E inkqubo yokutshajisa ngqo iimoto zombane
I-CSW 15 / 30K-E uthotho olunyuswe ngodonga olukrelekrele kwitshaja ekhawulezayo inemisebenzi epheleleyo yokukhusela, ilungile yobume bendawo encinci yokufaka ngaphakathi, kwaye zilungele abasebenzisi ukuba babize ngokukhawuleza.
Uluhlu lwe-CSW elonyuswe ngodonga olukrelekrele kwitshaja ekhawulezayo inemisebenzi epheleleyo yokukhusela, ilungele ukufakelwa kwendalo encinci ngaphakathi, kwaye ilungele abasebenzisi ukuba babize ngokukhawuleza.
JFY ECM / ECH (isikwere) 15KW High-effiture Okrelekrele off igridi inverter
Ukusebenza:> Uluhlu olubanzi lwegalelo voltage> Uluhlu olubanzi lwee-voltage ze-DC, ezisebenza kubungakanani beekhephu ze-veh, iibhasi ezincinci kunye nabaqeqeshi; > Unakho ukuxhasa ukuya kuthi ga kwiimodyuli ezingama-20 ezifanayo; > Isebenza kwimfumba yokutshaja ehlanganisiweyo, imfumba yokutshaja yokwahlulahlula, imfumba yento yokutshaja ekhethekileyo, iimfumba zokutshaja eziphathwayo kunye neetshathi ezihambayo njl. Ukusebenza okuphezulu:> Uluhlu olubanzi lombane ngamandla apheleleyo; > Ukwamkela ubuchwephesha bokwabelana ngokwamanani okuzenzekelayo ngokuchaneka okuphezulu kwe-curren ...